Muungaab: Qofkii hanti looga heysto Muqdishi halasoo xiriirto maamulka gobolka Banaadir – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 22 November 2014
Mareeg.com: Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab” ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in qof kasta oo guri ama hanta looga haysto magaalada Muqdisho ay la soo xiriirto maamulka si loogu wareejiyo.
Wareysi uu siiyay RM ayuu ku faahfaahiyay howl-gallo uu maamulku bilihi la soo dhaafay ka waday magaalada oo isagoo kaashanaya garsoorka dib loogu celiyay dad badan hanta looga heystay Xamar. wuxuu tilmaamay in wali howshaasi ay socoto ciddii hanta ay leedahay oo ay sharci u heysata looga heysto magaaladana uu maamulku diyaar u yahay inay u soo celiyaan.
“Waxaan ku guuleysanay inaan intaas oo guryo ah, oo dhul boosas bannaan ah oo si sharci darro ah dadka gacmahooda ugu jirtay inaan ka soo celinno oo aan si cid dadkii lahaa ugu wareejinno” ayuu yiri Muungaab.
“Inbadan waxaan ku baaqay ciddii Xamar dhul ama guri looga heysto gobolka Banaadir hala soo xiriirto, dad ayaa dibadaha ka soo laabteen, dad ayaa gudaha nooga yimaadeen, intii dukuminti sax ah wadatay waan xallinay arrinteeda” ayuu sidoo kale yiri Muungaab.
Wuxuu sheegay Muungaab in xoog loo adeegsan doono qaof kasta oo ay ku cadaato inuu heysto hanti uusan laheyn.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay hanti la kala heystay go’aan ka gaaray, iyadoo loo celiyey dadkii lahaa.